Nhau - Makomborero eCalcium Fluoride - CaF2 lenses uye windows
Kubatsira kweCalcium Fluoride - CaF2 lenses uye windows
Calcium Fluoride (CaF2) inogona kushandiswa pamawindows, lenzi, prism uye zvisaririra muiyo Ultraviolet kuenda kune Infrared nharaunda. Icho chinhu chakaomesesa, ichiomeswa zvakapetwa kaviri seBarium Fluoride. Calcium Fluoride zvinhu zveInfra-tsvuku kushandiswa zvinorimwa uchishandisa zvakasarudzika kucherwa fluorite, muhuwandu hwakawanda nemutengo wakaderera. Chemushonga chakagadzirwa mbishi zvinhu zvinowanzo shandiswa kune UV kunyorera.
Iyo ine yakaderera kwazvo refractive index iyo inobvumidza iyo kuti ishandiswe isina anti inoratidzira kupfeka. Calcium Fluoride windows ine nzvimbo yakabwinyiswa yakagadzikana uye inogara makore akati wandei pasi peyakajairika kudzamara tembiricha yakwira kusvika pa600 ° C painotanga kupfava. Mumamiriro akaoma ine tembiricha yekushanda yakanyanya ye800 ° C. Calcium Fluoride windows inogona kushandiswa sekristaro yekristaro kana kuti radiation yekuona krisimasi nekuimisikidza neakafanira asingawanzo epasi zvinhu. Iyo kemikari uye mumuviri yakatsiga kristaro ine yakanakisa mvura inodzivirira, makemikari anodzivirira uye anopisa maitiro. Inopa yakadzika yekumwa uye yakakwira kufambisa kubva kubva kuVhutu Ultraviolet 125nm kuenda kuInfra-tsvuku 8 ma microns. Kupararira kwaro kwakasarudzika kwemaziso kunoreva kuti inogona kushandiswa seyechromatic lens inosanganiswa nezvimwe zvinhu zvemaziso.
Zvese izvi zvivakwa zvinokurudzira kushandiswa kwakawanda muastronomy, kutora mifananidzo, microscopy, HDTV optics uye zvekurapa laser zviridzwa. Calcium Fluoride windows inogona kugadzirwa kubva kune vacuum ultraviolet giredhi Calcium Fluoride iyo inowanzo kuwanikwa mune cryogenically yakanyoroveswa kupisa thermal imaging. Sezvo yakagadzikana mumuviri uye nemakemikari inert nehupamhi hwekuoma, ndicho chinhu chesarudzo ye microlithography uye laser optics kunyorera. Achromatic Calcium Fluoride lenses inogona kushandiswa mune ese makamera uye teresikopu yekudzora mwenje wakapararira uye muindasitiri yemafuta neyegesi sechinhu mune ma detectors nema spectrometers.